ScummVM: tamba akawanda echinyakare nekuda kweichi chirongwa | Linux Vakapindwa muropa
ScummVM: tamba akawanda echinyakare nekuda kweichi chirongwa
ScummVM inoshamisa muchinjika-chikuva uye yemahara purojekiti inobvumidza iwe kutamba matoni echinyakare-kutamba-kutamba uye kushambadzira mitambo yemavhidhiyo kubva kune imwechete yepakati software. Uye zvakare, ine vhezheni itsva inowanika izvozvi inowedzera mimwe yemitambo inotsigirwa neiyi software, inova nhau dzinogamuchirwa kune vateveri vevaraidzo yedhijitari.
ScummVM vhezheni 2.2.0 "Inopindirana Kufungidzira" iri Iye zvino yawanikwa nemamwe mazita anokosha akawedzerwa nguva pfupi yadarika, senge Colossal Cave Adventure, zita rakaburitswa muna 1976 uye rakakurumbira semutambo wekutanga wekufungidzira.
Pamusoro pezita iri, pane zvakare rutsigiro runyorwa rukuru rwemitambo yemavhidhiyo yakatsigirwa. Uye kunyangwe hazvo pakutanga yaigadzirirwa kumhanyisa graphic adventures kubva kuLucasArt's SCUMM ginjini injini, ikozvino unogona zvakare kunakidzwa nekuwedzera kwekutsigirwa kwehuwandu hwemaginjini enjini akadai seADRIFT, AdvSys, AGT Level, ZCode, uye zvimwe zvakawanda. Izvo zvinopa mukana wekutenderedza 1600 mazita avo vanogona kutamba neScummVM.
Pamusoro peColossal Cave Adventure, mamwe mazita akawedzerwawo nguva pfupi yadarika zvinoshamisa kuwedzerwa kune aripo, akadai se:
Ziso reMutariri - Sega CD vhezheni
Inopindirana Fiction mitambo
Kutsvaga Kwemapurisa: SWAT
Prince naCoward, dudziro yeChirungu
Ultima IV - Kutsvaga kweiyo Avatar
Ultima VI - Muporofita Wenhema
Ultima VIII - Chihedheni
Nenzira, iwe unofanirwa kuziva kuti mimwe mitambo iri pachirongwa inoda mafaera yepakutanga yemutambo wevhidhiyo waunogona kuwana pamapuratifomu akadai seGOG, kana kudhawunirodha kubva kune zvimwe zvinyorwa. Vamwe vari pane izvo zvinyorwa havadi kuti iwe utenge kana kutora chero cheicho.
YeSummummVM vhezheni yeLinux, Zvimwe zvinhu zveiyi software chirongwa zvakagadziridzwa zvakare, sekuchengetedza otomatiki kune ese maginjini enjini, kuvandudzwa mune keymapper, uchishandisa iyo yemuno Linux file browser, zvikanganiso zvishoma kupfuura mune zvekare shanduro, nezvimwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » ScummVM: tamba akawanda echinyakare nekuda kweichi chirongwa
Mesa 20.2.0 inosvika pamwe nekuvandudzwa kwemakadhi eADD uye maGPU